Wararka Maanta: Arbaco, Apr 20, 2022-Guddiyada doorashada heer Fedaraal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland oo ka hadlay doorashada kuraasta Ceelwaaq
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa ugu horeyn sheegay in guddiga doorashada maamulka Jubbaland uu diyaar gareeyay dhamaan howlaha la xariira qabashada doorashada 16-ka kursi ee deegaan doorashada labaad ee loo wareejiyay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
"Waxaan diyaarinay dhamaan howlaha la xariira qabsoomida doorashada 16-ka kursi ee taala degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ee aan horay u shaacinay jadwalkooda, waxaana inaga go'an dhameystirka doorashada labaad ee maamulka Jubbaland inaga oo horay usoo gabagabeynay doorashadii kuraasta taalay deegaan doorashada koowaad ee Kismaayo" ayuu yiri guddoomiye Siyaad.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer Fedaraal oo dhankiisa ka hadlay arrimaha ku aadan doorashada guud iyo tan haatan lagu wado iney ka dhacdo Ceelwaaq ayaa sheegay inuu rajo wanaagaan ka qabo in si deg deg ah loo qabto kuraasta Ceelwaaq doorashadooda taalo.
"Doorashada dalka boqolkiiba 99 waan qabanay haatan waxaa inoo dhiman kaliya afar kursi oo Jowhar taala iyo 16 kursi oo Ceelwaaq taala, waxaana rajeynaya ama aan ku baqaaya in la dadejiyo doorashada 20-ka kursi ee guud ahaan ka harsan doorashada si ay uga qeyb noqdaan doorashada guddoonka Golaha Shacabka ee lagu wado 27-ka bishaan, waqtigaas ka hor ayaana rajeynaya in la doorto oo ay shahaado qaataan, lana dhaariyo oo ay doorashada ka qeyb galaan"ayuu yiri guddoomiye Muuse Geelle.
Guddoomiyaha guddiga doorashada heer Fedaraal Muuse Geelle ayaa sidoo kale ugu baaqay xubno ka tirsan guddiga doorashada heer Fedaraal oo uu sheegay iney wadaan caqabado ka dhan ah doorashada dalka, isagoo ka dalbaday iney ka fogaadaan waxyaabaha haatan abuuri kara dib u dhaca doorashada.
Guud ahaan doorashada Golaha Shacabka waxaa ka harsan 20 kursi oo 16 ka mid ah Jubbaland ku dhiman tahay halka afarta kalana ay Hirshabeelle ku dhiman tahay, waxaana la filayaa in 27-ka bishaan April ay dhacdo doorashada guddoonka Golaha Shacabka iyo labadiisa ku xigeen.